Itoobiya: R/Wasaaraha Cusub oo shaqadiisa ka bilaabay Killilka Soomaalida-Video – Kasmo Newspaper
Itoobiya: R/Wasaaraha Cusub oo shaqadiisa ka bilaabay Killilka Soomaalida-Video
Updated - April 8, 2018 11:31 am GMT
London (Kasmo), Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Itoobiya, Abiye Ahmed Ali ayaa Sabtidii, 7 April booqdasho ku tagay Jigjiga, Caasimadda Gobolka Soomaalida Itoobiya.
Waa booqashadiisii u horreysay tan iyo markii loo magacaabay xilkaas oo 5 casho laga joogo, oo uu ku tagayo Gobolkaas oo shaqaaqooyinkii dhacay sababeen qiyaastii 1 malyuun oo barakacayaal ah.
Khudbad uu dadka u jeediyay oo Tvga Dawladda laga tebiyay, Ra’iial Wasaaruhu, wuxuu isaga oo soo xiganaya isku dhacyadii Orommada iyo Soomaalida, ku tilmaamay nasiibdarro aan loo baahnayn in ay dhacdo. Wuxuuna ballan qaaday in uu ku dadaali doono sidii xal nabadeed oo dhakhso ah loogu heli lahaa iyo in taageero loo fidin doono dadka dagaallada ku barakacay.
Abiye oo horey u ahaa Sarkaal Sare oo ka tirsan Mulitariga Itoobiya wuxuu xilka kala wareegay, 27 March, Hailemariam Desalegn oo is casilay si is beddello dimuqraadi ah loo sameeyo. Khudbaddiisii caleema saarka, 3 April 2018, wuxuu diiradda ku saaray qaab dib u heshiisiin qaran ah iyo midnimo ummadeed, si loo soo afjaro xukunka degdegga ah ee dalka saaran.
Isbahaysiga Siyaasadeed EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front) ee ka taliya dalka wuxuu ka koobanyahay Xisbiyada Orommada (OPDO), Amxaarada (ANDM), Tigreyga (TPLF) iyo Qowmiyadaha Koofureed (SEPDM) oo dhammaantood isku ah Xabashida.
Laakiin Soomaalida oo ah qowmiyadda 3aad dhanka tirada dadka iyo dhulkaba kama tirsana, ilaa hadda, Isbahaysiga talada haya muddada 27ka sano ah, waxaana jiray qorshe sheegaya in lagu biirin doono bisha May ee sannadkaan.